तपाईँ फस्नु त भएको छैन? ह्याकरहरुको ध्यान फेसबुकतिर :: PahiloPost
तपाईँ फस्नु त भएको छैन? ह्याकरहरुको ध्यान फेसबुकतिर
काठमाडौं : 'म एकदमै समस्यामा परेको छु। मसँग मोबाइलमा व्यालेन्स छैन, तुरुन्तै पाँच सय रुपैयाँको रिचार्ज नम्बर पठाइदिनुहोला,' रमेश कुँवरले यो म्यासेज आफ्नो म्यासेन्जरबाट करिव २ सय जना साथीभाइलाई पठाए।
तपाईँ फस्नु त भएको छैन? ह्याकरहरुको ध्यान फेसबुकतिर को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।